कस्तो अवस्थामा रुसले परमाणु हतियार प्रयोग गर्नसक्छ ? — Sanchar Kendra
कस्तो अवस्थामा रुसले परमाणु हतियार प्रयोग गर्नसक्छ ?
काठमाडौं। रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनले देशका विशेष सेना ‘डिटरेन्स फोर्स’लाई हरेक समय तयार रहन निर्देशन दिएका छन्।
रोयटर्सका अनुसार डिटरेन्स फोर्समा आणविक तथा परमाणु क्षमताका हतियार चलाउने सेनाहरु पनि पर्दछन्।
पश्चिमा राष्ट्रले रुसविरुद्ध आक्रामक गतिविधि बढाएको भन्दै पुटिनले देशका रक्षा प्रमुखलाई परमाणु हतियार तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएका हुन्।
रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेपछि अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रले क्रेमलिनमाथि आर्थिक प्रतिबन्धहरु लगाएका छन्। उनीहरुले कडा शब्दमा रुसी आक्रमणको निन्दा गरेपछि रुस चिढिएको हो।
परमाणु हतियारसहित सेनालाई तयार हुन निर्देशन दिनासाथ रुसले ती हतियार प्रयोग गरिहाल्छ भन्ने होइन।
उता रुसले परमाणु हतियारको विषयमा गरेको निर्णयको खण्डन गर्दै अमेरिकाले भने उसले दादागिरी देखाएको आरोप लगाएको छ।
गतहप्ता मात्र युक्रेनको विषयमा हस्तक्षेप गर्ने विदेशी राष्ट्रले रुसबाट नराम्रो उत्तर पाउने पुटिनले चेतावनी दिएका थिए।
कस्तो अवस्थामा रुसले परमाणु हतियार प्रयोग गर्नसक्छ?
पुटिनले पछिल्ला केही दिनयता परमाणु हतियारको विषय बारम्बार दोहोर्याइ रहेका छन्। युक्रेनलाई सम्पूर्ण सैन्य क्षमताले आक्रमण गर्न आदेश दिँदै पुटिनले केहीदिन अगाडि भनेका थिए,‘युक्रेनको विषयमा बाहिरका जोसुकैले हामीलाई हस्तक्षेप गर्ने सोच्छ भने उसले यस्तो परिणाम भोग्नेछ कि त्यो उसले सोचेकै छैन र इतिहासमा कहिल्यै देखेकै छैन।’
रुस परमाणु हतियार सम्पन्न राष्ट्र हो र उक्त चेतावनीलाई इंगित गर्दै नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता तथा नोबाया गजेटा अखबारका प्रमुख सम्पादक दिमित्री मुरातोभ भन्छन्,‘पुटिनको उक्त धम्कीले सिधै परमाणु हतियार प्रयोगको संकेत गरिरहेको छ।’ पुटिनले एकपटक ‘रुस रहेन भने पृथ्वीको के काम’ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए।
सन् २०१८ को एक वृत्तचित्रमा पुटिनले भनेका थिए,‘यदी रुसलाई कसैले नष्ट गर्ने निर्णय गर्छ भने त्यसलाई जवाफ दिने कानुनी अधिकार हामीसँग छ। तर त्यो मानवता र दुनियाँको लागि संकटजनक कुरा हो।
म रुसको नागरिक हुँ र यही देशको राष्ट्रपति पनि। हामीलाई यस्तो दुनियाँको के मतलब जहाँ रुस नै छैन?’ अर्थात् उनले त्यसबेला पनि आफ्नो शक्तिशाली परमाणु बमको विषयमा बोलिरहेका थिए।
नोबल पुरस्कार विजेता मुरातोभका अनुसार यदि रुसलाई ठूलै आपत्ति आईपर्यो भने पुटिनले परमाणु हतियार प्रयोग गर्नुलाई नै उपयुक्त विकल्प भनेर रोज्न पनि सक्छन् जसलाई कसैले रोक्न सक्दैन।
अमेरिकी सेना लगायत नेटोमा आवद्ध सेना युक्रेन पुगेमा रुसले यो विकल्प छान्नसक्छ। किनभने गतहप्ता मात्र युक्रेनको विषयमा हस्तक्षेप गर्ने विदेशी राष्ट्रले रुसबाट नराम्रो उत्तर पाउने पुटिनले चेतावनी दिइसकेका छन्। एजेन्सीको सहयोगमा